Md. Juxoow waa maxay CO-FEDERATION armay se la mid noqotaa labadii tijaabo ee hore ee SSDF iyo Federalism? – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2019 3:45 g 0
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Axmed Juxa ayaa hadal uu ka jeedinayey madal Garoowe ku taal ka sheegay hadal ah in hannaanka Federaalka hadda la haystaa aysan ahayn mid Soomaali u cuntanta, loose bahan yahay in wadanka laga dhigo “CO-FEDERATION.”
Ummaduhu waxay ku dhisan yihiin tixgelin ku salaysan aragtiyaha ku qotoma mabaadiida siyaasadeed ee bulsho isla ogolaato, si ay ugu wada noolaato nabad iyo is tixgelin.
Soomaaliya waa waddan bed ahaan lagu qiyaaso 637,000 kmSq, waxa dega hal qawmiyad oo Soomaali la yiraahdo. Hannaan dawli ah oo dhinaca dimoqoraadiyadda ah ayaa ka hanaqaaday markii xornimada la qaatay, waxaase dhibaato ku ahaa musuq, eex, ninjeclaysi iyo daneysi shaqsiyeed, taasina waxay keentay markii danbe in ciidamadii xoogga dalku talada la wareegaan.
Iyadoo waddanka hal hoggaan ka taliyo, waxaa saraakiil Soomaaliyeed aasaaseen SSDF, oo ahayd tii ugu horraysay jabhadaha Soomaaliya ka abuurmay. Sida ay sheegeen hoggaankii jamhadaani, waxaa ujeedka loo aasaasay ahayd inay waddanka badbaadiyaan. Waxayse bilaabeen wax aan horay ummadda Soomaaliyeed u aqoon, ceebna ku ahayd, taasoo ah in saldhigeedu noqdo Itoobiya oo cadaawadi kala dhaxaysay Soomaalida, dadkuna u haystaan qofkii cadow magangalaa in ay ceeb tahay. Mase dhicin oo waxay furtay dariiq cusub, waxaana ku dayday jabahadihii SNM, SPM iyo USC.
Ciyaartii ay dheleenna gebagebadeedii waxay noqotay halka maanta la taagan yahay. Is haysiga iyo khilaafka dadka Soomaaliyeed markaad muuqaalkiisa guud eegto wuxuu u eg yahay qabaa’il wax isku haysa, arrintise xaqiiq ahaan waa dad iyagu dano xukun jacayl madaxmaray oo qabiilka adeegsanaya.
Iyadoo burburkii qabiilka lagu jiro haddana markale ayaa isla saraakiishii SSDF ee goboladii la oran jiray Waqooyi Bari waxa ay amaamudeen hannaan dadka ku cusub iyo “FEDERALISM.”
Federaalisam Soomaalidu aqoon uma laha, inta laga sharraxayna waa in yar oo qurxoon oo ah in cid kastaa degaankeeda iyadu maamul u samaysato, kadibna maamul guud la isugu yimaaddo, waxaase dadkii horboodayey u xusulduubeen in ay Soomaalida dhacsiiyaan inay tahay waddada saxda ah ee lagu najaxayo, ciddii ka hortimaaddana tahay kuwo aan dawladnimo rabin, Soomaalidiina waxay noqotay mid afkaarta dadka wata qabiil ahaan ku taageera iyo kuwo dano kale oo siyaasadeed ku taageera.
Markii Federalism la taageeray oo badda lugaha la soo wada geshayna waxaa uun la arkay in ay tahay nooc cusub oo ay ku soo baxday xudduud iyo maamul qabiil oo ay horboodayaan madax u dhaqmaysa sidii dagaal-oogayaashii sagaashamaadkii ee diiday in uu wadanku xasilo. Taasina waxa ay abuurtay walaac horleh oo dadka Soomaaliyeed ka qabaan nidaamka Federalism-ka.
Haddaba durbaanka mar kale uu Wasiir hore Juxa tumay waa wax kale oo cusub, waa se maxay?
Nidaamkan hadda afka Soomaalida ku cusub waa co-federation, muusan sharixin Md. Juxa, waxay se ku wacnaan lahayd in uu khudbadiisii ku yara sharraxo waxa ay isaga ugula wacan tahay in hannaankani yahay mid sax ah, iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore.
Mise waa uun fikir cusub oo laab-la-kac ah oo lamid ah sidii ay ku samaysmeen labadii fikir ee kan ka horeeyey, waa SSDF iyo Federalism. Saas oo ay tahay fikirkaan cusub aniga intaan ka fiiriyey dadka, ma jirto durbaan xoogan oo loo garaacay, si loo qaato waxaan cusub, wuxuu se ku jira karkarin, sida qofka maqaalkan qoray oo kale: CONFEDERAL REPUBLIC OF SOMALIA?
Haddaba ujeedka maqaaalkayga waxa uu yahay in Soomaaliya marba wax cusub oo aysan horay u arag miiska la soo saaro, maxaa dan ah oo ku jirta? Sidaas darteed waxaana jeclaan lahaa in taas Md. Juxa iyo ragga la qaba fikirkaan cusub ay ii sharaxaan, hadday baraare iyo wax noo keenaya wadajir ay tahay shuruud la’aan ayaan la qaadanaynaa?
Waxaa la yiri “booraan hadimo ha qodin, haddii aad qoddana ha dheerayn ku dhici doontaa ma ogide!” Waxaan taas uga danleeyahay, marka la fiiriyo qaabka siyaasadda ee Puntland ka jira, waa hanaan maamul goboleed, xubno baarlamaan ayaa doorta madaxweyne meerto u ah hal qoys oo bulshada degaankaas ka mid ah, ayna isu bedelaan kursiga, waxayna tani fogaysay qoysaska kale ee tolalka la ah ee deegaanka kuwada nool. In ka badan 20 sano oo Puntland dhisnayd lagama hirgelin tirakoob bulsho, xisbiyo iyo hab keeni kara doorasho qof iyo cod, waxay u dhici wayday, waa su’aal kale oo la is waydiinayo?
Hannaanka Co-federation ee Md. Juxa ka dhawaajiyey wuxuu iila egyahay wax aad ugu dhow sidii maamul u shaqeeya dawlad madaxbannaan (waa sida aan maankayga ka rogrogay), ma la is waydiiyey in cabashada dadka Puntland ee aan ahayn qoyska talada isu dhiiba ay qabaan, in ay iyana mar aan fogayn keeni karto kacdoon ay ku dalbanayaan wax cusub, iyo bilow jabhad cusub (sidii SSDF), federal iyo co-federaal, taasina ay noqoto falaartii cirka loo ganay ee kii riday madaxa kaga dhacday.
Md. Juxa waa saaxiibkay, reer ahaanna isku beel ayaan ka soo jeednaa, marka ay noqoto abtiriska beelaha Soomaalida, haddaba ma hayaa wasiirku wax keeni kara maamul ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed oo noqon kara mid cid kasta ay ku qanacsan tahay, hooyada Kulbiyow degan iyo tan Lawyacadde degan ay helaan xaq isku mid ah, lawada leeyahay, keentana waxeenna oo aan ahayn waxayga iyo annaa leh?
Waxaan aad ula sheekaystay dhalinyaro badan oo wakhtigaan heerka jamacadaha ku jira, ku kala nool laga soo bilaabo Boorame illaa Kismaayo iyo inta u dhaxaysa, waxay is waydiinayaan waxa Soomaalida oo hal qoys ahi ay u wada yihiin dad burburay? Waa su’aashaas Juxoow tan u baahan in looga jawaabo da’yarta hadda jirta ee adiga aad u tahay muunad ay ku dayanayaan.
Md.Juxa wixii gef ah ee aad qoraalkan ku aragto waan ka cudurdaaranayaa.
WQ: Maxamed Xasan Cirro | [email protected] | Qoraa | Dhaqanyaqaan